Wulfenite, laga bilaabo Madagascar / macdanta molybdate macdanta PbMoO4 / Video
Wulfenite, laga bilaabo Madagascar
Wulfenite waa macdan macdan ah molybdate oo leh qaabka PbMoO4. Waxaa badanaa laga helaa kareemo buluug khafiif ah oo leh casaan-oranji ah oo casaan-casaan leh, mararka qaar waa bunni, inkastoo midabku uu noqon karo mid aad u qiimo badan. Nooca jaalaha ah waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "macdanta jilicsan".
Waxay uuraystaan ​​nidaamka tetragonal, inta badan waxay ku dhacaan sida naqshad, barxadda casriga ah ama casuumada. Waxay sidoo kale u dhacdaa sida boodhka, bacaha qashinka ah. Waxaa laga helaa degaanno badan, oo la xidhiidha macdanta macdanta sida macdan yar oo la xidhiidha aagga oksidiidh ee kaydka macdanta. Sidoo kale waa weelka labaad ee molybdenum, waxaana lagu raadiyaa dadka wax soo iibsada.
Discovery iyo dhacdo
Wulfenite ayaa marka hore lagu sharraxay 1845 ee dhacdo ku taal Bad Bleiberg, Carinthia, Austria. Waxaa loo magacaabay Franz Xavier von Wulfen (1728-1805), macalinka reer galbeedka Australiya.
Waxay u dhacdaa sida macdanta labaad ee ku jirta kaydka macdanta ee oksijiinta. Waxay ku dhacdaa maskaxda, anglesite, smithsonite, hemimorphite, vanadinite, pyromorphite, mimetit, descloizite, plattnerite iyo qulqulado kala duwan oo birta iyo manganese ah.
Meelaha la xusay ee wulfenite waa Red Cloud Mine ee Arizona. Crystals waa midab casaan ah oo midabkeedu yahay mid aad u wanaagsan. Meelaha Los Lamentos ee Mexico waxay soo saareen kareemo qafiif ah oo mugdi ah.
Meel kale oo kale waa Mount Mount ee dalka Slovenia. Xasilloonyadu waa huruud, badanaana leh Hawlaha Firfircoon ee wanaagsan iyo Bipiramids. 1997, macdanta waxaa lagu sawiray shaabad boostada ee Slovenia.
Goobaha loo yaqaan 'wulfenite' waxaa ka mid ah: Sherman Tunnel, St. Peter's Dome, Tincup-Tomichi-Moncarch mining districts, Shiidaalka Mina iyo Bandora ee Minnesota.
Cajalado yaryar ayaa sidoo kale ka dhaca Bulwell iyo Kirkby ee Ashfield, England. Calaamaduhu waxay ku dhacaan galbeedka-wulfenite-uraxfureed asfaltite oo ku yaalla qumbaha xumbada. Wulfenitiga laga helo aaggan ayaa la mid ah guryaha (sida xaglaha paragenetic, dahab yar oo dahsoon oo ka mid ah galenas iyo maqnaashaha pyromorphite) ilaa wulfenites ee Alps oo laga yaabo inay asal ahaan ka soo jeedaan.